Tongasoa eto amin'ny Jinfuya cosmetics Beauty natao ho anao
Jinfuya Cosmetics dia miorina am-pireharehana amin'ny tanànan'ny anjely. Izy io dia marika hatsarana vaovao sy mivoatra izay afaka manome anao kosmetika tsy misy biby tsara indrindra. Izahay dia miahy ny amin'ny fahaiza-mividy sy ny maha-tafiditra, ary mamporisika ny vondrom-piarahamonintsika tia hatsaran-tarehy handray sy hanandrana makiazy. Izahay ...
Eye shadow dia kosmetika izay apetaka amin'ny hodi-maso sy eo ambanin'ny volomaso. Matetika izy io dia ampiasaina hanasongadinana ny mason'ilay mitondra azy na hanintona azy kokoa. Manampy ny halaliny sy ny refin'ny mason'ny olona ny aloky ny maso, mameno ny lokon'ny maso, na misarika ny maso fotsiny ny maso. Eye sh ...
Ny fototr'ity ranoka fivarotana be mpividy indrindra izao ao anaty alokaloka 40! Ny formula maivana ary tsy misy menaka dia mifangaro voajanahary amin'ny hoditra ho an'ny famaranana semi-matte tsara tarehy izay maharitra tontolo andro. Ny raofin-drano dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny volon-koditra sy ny tonon-koditra ho an'ny hoditra mazava kokoa. Mety amin'ny karazana hoditra rehetra sy ...
Raha amin'ny resaka makiazy dia ny fanaintainana ny tavanao no tokony ho filaharanao voalohany alohan'ny hifindranao amin'ny makia molotrao sy ny makiazy amin'ny masonao. Saingy mety hanjary sarotra ny raharaha. Tena mila primer ve ianao? Misy miafina ve aloha na aorian'ny fototra? Izahay eto dia haka ny tombantombana amin'ny fampitahana amin'ny s ...